“Waxaa la iila dhaqmay si ka baxsan bini-aadannimada” – Luis Suarez – Gool FM
“Waxaa la iila dhaqmay si ka baxsan bini-aadannimada” – Luis Suarez
(Barcelona) 15 Juunyo 2019. Weeraryahanka reer Uruguay iyo kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii uu kala kulmay dhacdadii caanka ahayd ee dhex martay isaga iyo daafaca reer Talyaani ee Giorgio Chiellini koobkii aduunka ee ka dhacay dalka Brazil 2014, isagoo sheegay inuu u baahanaa caawinaad nafsi ah.
Dhacdadan ayaa ka dhacday kulan ka tirsanaa wareega group-yada, xili xulka Talyaaniga uu la kulmay guuldaro 1-0 ah, Luis Suarez ayaana wareysi uu ku bixiyay shabakada “Fox Sports” wuxuu ku sheegay:
“Xaaskeyga ayaa i weydiisay wixii dhacay, waxaana u sheegay inaan si fudud u riixay, waan aqbali waayay xaqiiqada, sababtoo ah waan diidanaa, taasina waxay ahayd qalad weyn”.
“Waxaan waydiistay caawimaad dhinaca cilmi-nafsiga ah, taasina waxay iga caawisay inaan aqbalo qaladkeyga iyo kobcitaankeyga, dhibaato badan ayaa isoo gaartay wakhtigaas, waxaana sidoo kale ila dhibtooday, xaaskeyga, caruurteyda iyo saaxiibaday kooxda”.
“Waxaa la iguula dhaqmay si bini-aadanimo ka bax ah, sidaas darteed, waxaan heshiis u saxiixay kooxda Barcelona iyadoo aan la ii soo bandhigin warbaahinta, waxaan u maleynayay in xirfaddaydu ay dhammaatay, isla markaana aan u baahanahay inaan gabi ahaanba ciyaaraha ka fariisto”.
Kooxo burcad ah oo u dhacay guriga xiddig ka tirsan Real Madrid
Xiliga uu Antoine Griezmann ku biirayo kooxda Barcelona oo shaaca laga qaaday